သင်၏ Online Shop အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း - Semalt ၏အပ်နှံထားသော SEO Dashboard Tool
သင်၏ Online Shop အားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နည်း Semalt's Dedicated SEO Dashboard Tool
အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်ပတ်ပုံသည်၎င်းနှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ လူတိုင်းနီးပါးအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ရန်လိုအပ်သောအချိန်တွင်ယခုအခါစီးပွားရေးလောကသည်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာသူတို့သည်အောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင်ရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး သည် Ubersuggest နှင့် Ahrefs ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမသိရှိပါကသူတို့၏ပိုက်ဆံများကိုပိုက်ကွန်ထဲစီးဆင်းလျှက်ရှိသည်။ ငွေအမြောက်အများပါ!
ဒီတော့သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ကဘတ်ဂျက်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလေ့လာမလဲ။ Semalt သည်သူတို့နှင့်အတူသင့်အတွက်အဖြေရှိသည် အပ်နှံ SEO ဆိုသည်မှာ Dashboard ! ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည် Ubersuggest နှင့် Ahrefs ကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်နှင့်တူညီသောအရည်အသွေးရှိရုံသာမကပရိုဂရမ်အားကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအထုပ်တွင်မည်သို့ဖတ်ရမည်ကိုသင်ပေးနိုင်သည်။ $ 10 ဒိုမိန်းနှုန်း! ဤဆောင်းပါးသည် SEO ၏အစများနှင့်လေ့လာမှုများကိုလေ့လာစဉ် Dedicated SEO Dashboard ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်သင်၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးနေရာချရမည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံး SEO ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့သုံးစွဲသူအသွားအလာ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်တိုးတက်စေရန်အနုပညာဖြစ်သော Search Engine Optimization ၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုစီသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန် crawlers များထုတ်လွှတ်သည်။ သူတို့သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ရောက်သောအခါသူတို့ကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်ရရှိစေရန်၎င်းတို့အားအလိုရှိသည်။ ပြီးတော့ crawlers တွေကအရာအားလုံးကိုကြည့်လိမ့်မယ်လို့ပြောရင်သူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ။ အဲဒီသတ်သတ်မှတ်မှတ်စာမျက်နှာကိုပို့ဆောင်ပေးမယ့် link၊ အဲဒီစာမျက်နှာကသူတို့ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ link၊ စာမျက်နှာမှာသင်သုံးတဲ့စကားလုံး၊ ဖန်တီးတဲ့ဒီဇိုင်းစာစီစာရိုက်။ ယခင်စာမျက်နှာအားကြည့်ရှုခဲ့ကြသောလူများ ... ထိုစာရင်းသည်ဆက်သွားနိုင်သည်
crawlers စုဆောင်းသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်ဗဟိုအချက်အချာသို့သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကို သုံး၍ ကျန်အကြောင်းအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ SERP (ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများအတိုကောက်) ဟုခေါ်သည့်ဤရမှတ်သည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်ဆုံးဖြတ်မည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးရမှတ်များကိုရလဒ်စာမျက်နှာ၏ထိပ်တွင်တွေ့ရပြီးကျန်သည်အကောင်းဆုံးကိုအဆိုးဆုံးအထိလိုက်နာလိမ့်မည်။ SERP ရလဒ်သော့ချက်စာလုံး၏ပထမစာမျက်နှာတွင်သူတို့ဆင်းသက်ပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်အောင်မြင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
၎င်းသည်ဖိအားများစွာနှင့်တူနေနိုင်သော်လည်းမှန်ကန်သောကိရိယာများနှင့်ဗဟုသုတများကသင့်ကိုထိုနေရာတွင်ရောက်ရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။ Semalt သူတို့ Dedicated SEO Dashboard ကိုဖန်တီးသောအခါထွက်ပေါ်လာသည့်အဆုံးပန်းတိုင်မှာအားလုံးပါ ၀ င်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာတွင်တင်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်ပတ်ရန်သို့မဟုတ်နားလည်ရန်ဘွဲ့မလိုအပ်ပါ။ သင်ရုံပွင့်လင်းစိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန် Semalt သည်စာရင်းသွင်းရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်ဤအရာကိုနည်းလမ်းနှစ်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် - သင်၏ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ကိုသုံးပါ၊ သို့မဟုတ်ပေါ်တယ်တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်။ သင် Google သို့မဟုတ် Facebook ဖြင့်ဝင်ချင်ပါသလားဟုမေးသည့်အခြားစာမျက်နှာများကဲ့သို့ Semalt သည်ထိုပရိုဖိုင်းမှသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုယူပြီးသင့်အတွက်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ Semalt ကဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်အဆင်မပြေလျှင် Dedicated SEO Dashboard portal တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်အချက်အလက်များဖြည့်နိုင်သည်။
ဒုတိယ - Dedicated SEO Dashboard တွင်အကောင်အထည်ဖော်သည့် dual grading Semalt စနစ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ တစ်စုံတစ်ရာကရာခိုင်နှုန်းကိုဖော်ပြသည့်အခါ၎င်းသည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိအကွာအဝေးတွင်ရှိလိမ့်မည်။ ၉၀-၁၀၀ သည်သင်ရနိုင်သောအကောင်းဆုံးရမှတ်ဖြစ်သည်၊ ၅၀-၈၉ သည်အထုပ်၏အလယ်တွင်ရှိပြီး ၀-၄၉ တွင်သင်လုပ်စရာများစွာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်အပိုင်းတစ်ခုသို့ပိုမိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာသောအခါအချို့သောအရာများသည်၎င်းတို့ဘေးတွင်အစက်အနည်းငယ်သာရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဤအစက်များ၏အရောင်သည်သင်မည်သည့်အရေးယူမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ အစိမ်းရောင်ဆိုတာကပစ္စည်းသွားဖို့ကောင်းတယ်၊ လိမ္မော်ရောင်ကအလုပ်တချို့သုံးနိုင်တယ်၊ အနီရောင်ကဒီပြonနာကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်။
အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ခလုပ်သုံးခုနှိပ်နိုင်သည်။ chat bubble သည်သင်ရှိသည့်ပြissueနာတစ်ခုနှင့် Semalt ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွယ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်ထံသို့အမြန်ဆုံးပြန်လာကြလိမ့်မည်။ နောက်ခလုတ်တစ်ခု (အလံတစ်ခုပါ ၀ င်သည့်စက်ဝိုင်းတစ်ခု) သည်သင့်အားစာမျက်နှာရှိဘာသာစကားကိုရွေးချယ်မှု ၁၁ ခုအနက်မှတစ်ခုသို့ပြောင်းပေးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကသင်၏ Semalt Dedicated SEO Dashboard account ကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးကိုစာမျက်နှာ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်သို့အဆင်ပြေစွာတွေ့နိုင်ပြီးသင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်သင့်ကိုအာရုံမပျံ့လွင့်စေပါ။
အကယ်၍ သင်သည် "မဟုတ်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" သို့မဟုတ် "နောက်ပိုင်း" ကိုရွေးပါကထိုပရိုဂရမ်သည်သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိမီးသီးကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လမ်းညွှန်ကိုကြည့်နိုင်သည်ကိုလည်းသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ သင် "Open Guide" ကိုရွေးပါက၎င်းသည်စာမျက်နှာရှိခလုတ်များအားလုံးကိုဖြတ်လျှောက်သွားရန် program ကိုအချက်ပြလိမ့်မည်။ ငါဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားအထူးအကြံပြုလိုတယ်, ဒါကအလွန်သိကောင်းစရာများဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ကဏ္ with တစ်ခုနှင့်ပြီးဆုံးသောအခါနောက်ထပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ၎င်းကသင့်အားပရိုဂရမ်ကိုဆက်လက်ရှင်းပြပါလိမ့်မည်။ သင်ဂရုစိုက်နေကြောင်းသေချာပါစေ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီကလမ်းညွှန်ကိုတစ်ကြိမ်သာကြည့်ဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတော့ Semalt ကိုကြည့်ရအောင် အပ်နှံ SEO ဆိုသည်မှာ Dashboard သောအစီအစဉ်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သင်ရှာဖွေနေသည့်အတိအကျကိုရှာဖွေသောအခါ dashboard ကိုဝှက်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်သင့်ကိုအလုပ်မှအာရုံလွဲသွားစေသည်။
၎င်းသည်စီမံကိန်းများစွာနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုများအကြားတွင်သင်အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။ အိုး၊ ဒီပရိုဂရမ်နဲ့သင့်ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမျက်ခြည်မပြတ်အောင်ပြောဖို့မေ့နေခဲ့သလား။ သင်သည်သင်၏နံပါတ်များကိုကြည့်နိုင်ရုံသာမကသင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုပါထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့သည်သင်အမြဲတမ်းရှေ့တွင်ရှိနေသည်။
ဤအရာသည် Add Website ခလုတ်မှတဆင့်သင်ပေါင်းထည့်လိုက်သောစာမျက်နှာအားလုံးကိုလျင်မြန်စွာကြည့်ရှုစေသည်။ ရလဒ်အားလုံးကို ဖြတ်၍ သင်လျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်ပြီးသင့်အားလမ်းညွှန်ပေးမည့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ဤဥပမာကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်သည်နာမည်ကြီးလက်လီဆိုင်အချို့ဖြစ်သော Walmart, Target နှင့် Kmart ကို အသုံးပြု၍ ဥပမာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Kmart သည်များစွာကျဆင်းလျက် Walmart နှင့် Target သည်လူကြိုက်များလာသည်။ ဤကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည် Kmart ၏နံပါတ်များကိုကြည့်။ သူတို့မှားနေသောအရာများကိုကြည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် Walmart နှင့် Target ကိုကြည့်ပါ၊ သူတို့မှန်ရာကိုသူတို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ SEO ကိုတိုးတက်စေရန်သင်နှစ် ဦး စလုံးရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒီရွေးချယ်မှုသုံးခုစလုံးသည်သင့်အတွက်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးသည်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်၊ မည်သည့်စာမျက်နှာများကသင့်ကိုအများဆုံးအသွားအလာပေးနေသလဲနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကစျေးကွက်တစ်ခုတည်းတွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ မှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါကသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လူအများကြားထဲကဆွဲဆောင်သောတိကျသောအကြောင်းအရာကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သင့်သည်။
Dedicated SEO Dashboard သည်သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်နံပါတ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုပြသမည့်အမှတ်ကိုချက်ချင်းပေးလိမ့်မည်။
သင်ပြtheနာကိုမှန်ကန်စွာဖြေရှင်းလိုပါက Errors ခလုတ်ကို နှိပ်၍ သင်၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် Semalt တွေ့ရှိသောပြallနာအားလုံးကိုပြလိမ့်မည်။ သတိပေးချက်များသည်ပြproblemနာဖြစ်သော်လည်းအမှားများကဲ့သို့အရေးမကြီးပါ။ စစ်ဆေးမှုအားလုံးတွင်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ အောင်မြင်သောစာရင်းစစ်များမှာသင်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများဖြစ်သည်။ သင်၏အခြေခံဖောက်သည်သည်သင်၏ဖောက်သည်မြင်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျော်ဖြတ်နေသည်။
Content Button ကိုနှိပ်သည့်အခါပစ္စည်းနှစ်ခုရှိသည်။ Page Uniqueness check နှင့် Website Uniqueness check ဖြစ်သည်။ သူတို့ကတူညီတဲ့ရလဒ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုကြသည်; သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်မည်မျှထူးခြားကြောင်းနှင့်သင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်မျှထိရောက်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ သူတို့ကိုထူးခြားစေသည့်အချက်မှာ Page Uniqueness သည်စာမျက်နှာတစ်ခုစီကိုအပြည့်အ ၀ စစ်ဆေးခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထူးခြားမှုသည်စာမျက်နှာတိုင်း၏ "Keywords in TOPS" ရာခိုင်နှုန်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကိုခွဲခြမ်းပေးလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ကိန်းဂဏန်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပြူတာတစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်မည်မျှကြာကြာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ကိုဤအရာကသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ ပြissuesနာတစ်ခုခုရှိရင် Errors to Fix လို့ခေါ်တဲ့ tab တစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒီ tab ကငါအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရောင်အစက်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကမည်သည့်ပြissuesနာများကိုဖော်ပြရန် drop down menu ကိုနှိပ်ပါ။ သင်လေ့လာနိုင်သော "ပိုမိုလေ့လာရန်" လင့်ခ်တစ်ခုရှိပြီးထိုပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
သင်ဖန်တီးသောစံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြု၍ အစီရင်ခံစာကိုဖန်တီးမည်။ ပေးပို့အချိန်ဇယားဖန်တီးပါလိမ့်မယ် အပ်နှံ SEO ဆိုသည်မှာ Dashboard သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေ့စွဲအပေါ်အစီရင်ခံစာထုတ်လုပ်ရန်။ အစီရင်ခံစာဖြန့်ဝေအချိန်ဇယားသည်အစီရင်ခံစာပေးပို့ချိန်ဇယားခလုတ်မှဖန်တီးသောအစီရင်ခံစာများကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ White label template နှင့် Delivery template သည်သင်၏အစီရင်ခံစာများကိုသင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်ကိုက်ညီရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Semalt ၏ Dedicated SEO Dashboard သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရုံသာမကအသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူပြီးပရိုဂရမ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ကြားပေးသည်။ ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာသုံးပြီးငွေကုန်ကြေးကျများသည့်အချိန်တွင် Ubersuggest နှင့် Ahrefs တို့အားထိုပိုက်ဆံအားလုံးကိုဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ။ သင်သည်သင်၏ SEO ကိုတိုးမြှင့်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။